Podcast 2x10 an'ny Actualidad iPad: Apple Music tonga amin'ny Android ary bebe kokoa | Vaovao IPhone
Ity herinandro ity ao amin'ny podcast miresaka momba azy Apple Music sy ny fahatongavany eo amin'ny lampihazo mpifaninana lehibe indrindra aminy, Google. Android dia efa manana rindranasa ao amin'ny Google Play for Apple Music, ary andrasana hatrany ny fomba fandraisan'ny mpampiasa Android ny serivisy mozika an'i Apple. Niresaka momba ny fandefasana ny iPad Pro sy ny tsy fahombiazan'ny sarimihetsika Steve Jobs ihany koa izahay.
Henoy »2 × 10: Apple Music tonga amin'ny Android» amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 10 an'ny Actualidad iPad: Apple Music tonga amin'ny Android sy maro hafa
Google Maps dia hahafahanao misintona sy mivezivezy ivelan'ny Internet
Swiftkey dia nohavaozina miaraka amin'ny emoji vaovao an'ny iOS 9.1